Indlela yokuxelela ubuchule bokukhangela injini yokukhangela kwiinkonzo zamatrice?
Okwangoku, bonke oomashishini baqonda ukuxabisa kweengcali zokukhangela injini. Njengoko i-SEO yindlela kuphela yokuphucula ukubonakala kwoshishino lwe-intanethi, abathengisi be-intanethi bakulungele ukutshala imali ebalulekileyo kwi-website. Nangona ezinye iindlela zokuphromotha, ubuchule bokukhangela injini yokukhangela kunika intlawulo ephezulu kunotyalo-mali. Abanye abanikazi boshishino bazifumana bexhamla kwinkqubo yokucwangcisa kwaye banqume ukwenza ngokwabo. Nangona abanye bekhangela i-ejensi ethembekileyo yokwakha ikampu yokuphromotha kunye nokusingatha zonke iinkqubo zokulungiselela ukususela ekuqaleni ukuya ekupheleni - free find my super funds. Nangona kunjalo, abanye abanikazi bewebhusayithi bayifumana ingqiqo yokuqesha abaqhubi be-freelancers okanye abacebisi be-SEO ngabendlu. Benza isigqibo sokugcina imali. Ngelishwa, ayisoloko ifikelelekayo ithetha umgangatho. Inxalenye ekhohlakeleyo yokuqesha iqela le-SEO iqela licinga ukuba yeyiphi indlela eya kuba yinto ebalulekileyo kwi shishini lakho.
Ukuba uqala ukuphequlula umnatha ukuze ufumane uhlobo olufanelekileyo lweenkonzo zokuphucula injini, uzakujamelana nee-arhente ezininzi kunye nabacebisi be-SEO ngaphakathi kwendlu elinde ukuphucula i-website yakho.Ezi nkampani ziya kuthi zibonelele zonke izinto ozifunayo. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba ufunde umehluko phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zokubonelela ngeenkonzo.
Okokuqala, kufuneka sikwazi ukwahlula phakathi kweenkampani zengcali yokukhangela injini kunye nababoneleli ngeenkonzo ze-SEO.Bobabini bajoliswe ekufikeleleni injongo efanayo. Nangona kunjalo, baneendlela ezahlukeneyo zokuhlangabezana neenjongo zezoshishino. Ngoko, makhe sithethe ngokubanzi malunga nale mibini yeeNkonzo ze-SEO.
Ii-arhente zokuphuculwa kweenjini zophando
Namhlanje, akukho zindlela ezinokukunceda ukuba uqinisekise ukuba ingenayo inkampani enkulu kwi-SEO. Kukho uninzi lwabangenazo ootitshala abangakwazi ukuthetha ulwimi lwe-SEO, kunye nezinye ezikwazi ukuqonda ngokubanzi izicwangciso zokuzicwangcisa kunye namava angenalutho ukubonelela ngeendlela ze-SEO.Kuyinto ehlukileyo ngokupheleleyo ukuthembela ngubani onokunyamekela ishishini lakho kwi-intanethi kwaye unokukunceda ukuba uphumelele kule ndawo okanye kwinkampani eyenza iintlobo zempumelelo echazwe ngasentla.
I-arhente yokuphuculwa kweenjini zokuphangela i-intanethi idla ngokunqunyulwa ngaphezu kwayo yonke into. Banoba namava ngezandla ngokuphumeza izicwangciso zokwenza ubuchule eziza kuphumelela. IiNkonzo ze-SEO zoLuntu ziza kufumana ixabiso lentlawulo. Nangona kunjalo, oku kutyalomali kwiimeko ezininzi kubuya kwiindawo ezihamba phambili ngendlela yabathengi abatsha kunye nokuthengisa. Iingcali ze-SEO zengcali zihlala zinika ithemba elicacileyo liza kuzisa. Bakukubonelela ngekhompyutheni yokunyusa-nyathelo-nyiweyo eyenziwa ngxelo epheleleyo kunye nenkxaso rhoqo. Esinye isizathu sokuba ufanele usebenzisane neenkampani ze-SEO zinobuchule kukuba banamava eminyaka ehlangeneyo kwiindawo ezahlukeneyo zokukhuthaza i-intanethi kwaye bamisela indlela eya kunika iziphumo. Ii-arhente zokuphuculwa kweenjini zophando zingakunika izicwangciso zokuphromotha ezicwangcisiweyo kwaye zifumane indlela ethile kwi shishini lakho.
Umcebisi we-SEO wangaphakathi kwindlu
Ukuphequlula umnatha, unokufumana nenani elingenakubalwa lootitshala be-SEO ezizimeleyo. ukuqashelwa kwegama. Nangona kunjalo, ezi zinyaniseka njani? Umsebenzi womntu oyedwa awukwazi ukuba ngumsebenzisi ofanayo nomsebenzi weqela lomyalelo. Uninzi lwama-freelancers we-SEO lunokunika abaxhasi babo iinkonzo ezisisiseko zokuphucula iinkonzo ezingenakuncedo kwiindawo ezisanda kutshilwa. Nangona kunjalo, kunokuba ngumngeni kubo ukufumana indlela ethile kwi shishini lakho. Yingakho kubalulekile ukwenza uphando ngaphambi kokuba usayine naziphi na izivumelwano kwaye wenze nayiphi na intlawulo ukuqinisekisa ukuba umcebisi we-SEO unokukunceda ngeemeko ezithile.